Ukudlala njani iiChords ze 'Baa, Baa, Iigusha ezimnyama' kwiGititar
Ukuzilibazisa kunye Nemisebenzi Iithebhu & Umculo
Ukufunda Ukudlala Iingoma Zabantwana KwiGititar
Amaqhosha okufuneka udlale ingoma yabantwana bendabuko ethi "Baa, Baa, i-Black Sheep" ziyisiseko. Konke okufuneka ukwazi ukuba zizinto ezintathu: i- C enkulu, i-F enkulu, kunye no- G .
Nika le ngoma, kwaye kuya kuba lula kuwe ukuba udlale ezinye iingoma zabantwana kunye neengoma zabo.
'Baa, Baa, Chords'
Amagama ambalwa ashintshile ngaphezu kweminyaka, kodwa isingeniso se-nursery sisigxininisekile ngokususela ekubambeni kunye neengoma zomculo weengoma zabantwana baseFrentshi "Hayi!
wena dirai-je, umama. "
'I-Baa, Baa, i-Black Sheep' Iingcebiso zokuSebenza
Kukho iipateni ezinokubakho zokusetyenziswa ezinokuzisebenzisa xa udlala "iBhaa, Baa, i-Black Sheep": Uqala ukusebenzisa i-strums ephantsi, kwaye okwesibini isebenzisa i-strums ye-down and up. Bobabini kulula.
Ukuba ufuna ukujamelana neqhinga elilula kuqala, qhafaza isiginci sakho izikhathi ezine kumgca ngamnye we-lyric. Ukuba kukho enye iqhosha kumgca (umzekelo, umgca wokuqala wengoma unomxholo ophezulu kuphela kwiC), iqhosha leqhosha eliphindwe kane ngokukhawuleza kwisincinci esingaphantsi.
Imigca apho kukho izibini ezimbini, qhawula ikhefu nganye ngokukhawuleza ngokunyuka kwehla.
Kuba kunzima kakhulu kunona kunjalo nje iprothementi elula yokulula, yenza umgca uze uphakamise ngamnye umgca ophantsi kwinguqu yangaphambili. Oku kuthetha ukuba udlala umgca ngamnye ngomgca owodwa kuphela kwezihlandlo ezisibhozo (phantsi ukuya phezulu phezulu phezulu phezulu).
Imigca neengqungquthela ezimbini, udlala i-chord nganye yezihlandlo ezine (phantsi kwehla phezulu). Akukho ziqhinga okanye iinguqu kuyo yonke ingoma.
I-F enkulu chord inikezela umngeni omkhulu, kodwa kukho iingcebiso zokuziqonda.
Imbali ye 'Baa, Baa, Iigusha ezimnyama'
Iingoma zomculo zivela kwiNgqungquthela yaseNgesi eyayibhalwe kwi-bhileni ye-12. Umqulu wokuqala oshicilelweyo oshicilelweyo uvela kwi-1700s. Ingoma iyasetyenziswa kwiingoma ezininzi, ngokugqithiseleyo "I-Twinkle, Twinkle Little Star" kunye ne "Alphabet Song". Umtshato wale ngoma kunye nomculo waqala ukupapashwa ngo-1879 kwi "Nursery Songs and Games".
Ubulukhuni babudlala indima ebalulekileyo kwizoqoqosho zaseNgilani malunga nekhulu le-12. Isiqulatho sichaza ukuhlawulwa kweerhafu ngaphezulu kwemveliso yezolimo. Ezo zikhwama ezintathu zoboya, omnye waya kwinkosi (inkosi), enye kwicawa (udade), kwaye omnye wasala ukuba umlimi (inkwenkwana).
'Iingelosi Sizivelele Ephakamileyo'
Iingu-80 zeeNgoma eziphezulu zeGitars zombane